September 29, 2017 – CRM
United Nations (CNN)In the past four weeks over halfamillion Rohingya Muslims have been forced to flee Myanmar to escape an orchestrated campaign of violence described by the UN as “ethnic cleansing.” But it wasn’t until Thursday that the UN Security Council held its first public meeting on the situation in more than eight […]
Posted on September 29, 2017 Author swelsone	Comment(0)
At the UN Security Council yesterday, both the UN Secretary-General andanumber of UNSC members called for tough pressure on the Myanmar government, as the crisis in Rakhine State—and the exodus of refugees into Bangladesh—continues with little let up. U.S. Permanent Representative to the United Nations Nikki Haley called for all countries to stop […]
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေအရပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ စက်တင်ဘာ လ ၂၈ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့က တံခါးဖွင့်အစည်းအဝေးတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးအတွင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကောင်စီကို အစီရင်ခံတင်ပြသလို လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း တောင်းဆိုတာတွေကို အသီးသီးပြောသွားကြပါတယ်။ ဒီပြောဆိုချက်တချို့ကို ကောက်နုတ်စုစည်းပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်ပြောပြပါမယ်။ မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးအဖွင့်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres က အရင်ဆုံး အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့ထဲ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ Arakan Rohingya Salvation Army က မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကတည်းကဆိုရင် လက်ရှိအခြေအနေဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ယိုယွင်းလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကို သူ့အနေနဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတာ […]
EU leaders call for immediate action to end persecution against Rohingyas
Posted on December 15, 2017 Author swelsone
Armed Forces ready to join humanitarian mission in Rakhine Read more at https://m.malaysiakini.com/news/394593#YDmteX6sZSyayxv3.99
Posted on September 8, 2017 Author swelsone